Meelaha gawaarida la dhigto Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Meelaha gawaarida la dhigto gudaha Benidorm
1 - 10 ee 37 Liisaska
Waxa daabacay Daniel Brewer
arag Meelaha gawaarida la dhigto la daabacay 3 days ago
Waxa daabacay Christian Galiana
arag Meelaha gawaarida la dhigto la daabacay 1 week ago
arag Meelaha gawaarida la dhigto la daabacay 3 months ago
arag Meelaha gawaarida la dhigto la daabacay 4 months ago
Booska baarkinka waa goob loogu talagalay baarkinka, ha loo xiro ama aan la furin. Meelaha gawaarida la dhigto waxay ku jiri karaan garaash dhigashada, baarkinka gawaarida ama jidadka magaalada. Badanaa waa meel bannaan oo lagu calaamadeeyay calaamadaha dusha sare ee wadada. Gawaarida ayaa ku habboon gudaha bannaan, ha ahaato baarkin isbarbar dhig ah, baarkin ku-meel-gaar ah ama baarkin go'an. Waxay kuxirantahay goobta baarkinka la dhigto, waxaa jiri kara qawaaniin la xiriira waqtiga loo oggol yahay in la dhigto iyo khidmad la bixiyo si loo isticmaalo baarkinka. Marka baahida loo qabo boosasku ay ka saraan gawaarida sahaminta gawaarida ayaa laga yaabaa inay ka buuxiyaan baarkin-ku-socodka wadada, jiqda iyo meelaha kale ee aan loogu talagalin ujeedka.